आफ्नो युवती भर्जिन हुन् कि होइनन् भनेर कसरी थाहा पाउन सकिन्छ ? जान्नैपर्ने कुरा ! - Mitho Khabar
आफ्नो युवती भर्जिन हुन् कि होइनन् भनेर कसरी थाहा पाउन सकिन्छ ? जान्नैपर्ने कुरा !
June 25, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on आफ्नो युवती भर्जिन हुन् कि होइनन् भनेर कसरी थाहा पाउन सकिन्छ ? जान्नैपर्ने कुरा !
योनि महिलाको नली आकारको प्रजनन अंग हो र बाहिरवाट देखिने प्वाललाई योनिद्वार भनिन्छ । यही योनिद्वारको ठीक भित्रपट्टि गुजमुज्ज परेको पातलो छालाको पत्र वा झिल्ली हुन्छ जसलाई योनिच्छद भनिन्छ । पहिले–पहिलेको जमानामा योनिमा भएको योनिच्छद यौनसम्पर्क गर्दा च्यातिएर रगत आउनुलाई नै केटीको कौमार्य भंग भए– नभएको आधार बनाइन्थ्यो । यसको प्रमाणका लागि विवाहको पहिलो रात सेतो तन्नामा सुत्नुपर्ने चलन चलाइएको थियो ताकि रगतको दाग स्पष्ट देखियोस । यद्यपि यो आधारलाई वैज्ञानिक मान्न सकिँदैन ।
विशेष गरेर केटीको कौमार्य विकसित मानव सम्यताको मात्र नभै पहिलेदेखि नै मानव यौनिकताको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष रहँदै आएको पाइन्छ । यसमा कसको नियन्त्रण हुने भन्ने एक किसिमको द्वन्द्व जहिले पनि छ । विवाहमा कुमार केटालाई कन्या (केटी) खोज्ने चलन भए पनि विशेष गरेर कुमारी केटीको सन्दर्भमा कौमार्य भङ्ग भए–नभएको कुराले निकै महत्व राख्छ । यस्तो स्थितिका कन्या कुमारीलाई अक्षत योनि भनिन्छ ।
कुनै व्यक्तिसँग यौनसम्पर्क राख्नु नै कौमार्य भङ्ग हुनु हो । यसलाई विशेष गरी योनि–लिंग मैथुनको सन्दर्भमा लिइन्छ । अहिले कस्तो किसिमको यौन क्रियाकलापलाई यौनसम्पर्क मान्ने अनि कस्तोलाई नमान्ने भन्ने प्रश्न पनि छ । केटीका लागि कुमारित्व र केटाका लागि कुमारत्व शारीरिक कुरा मात्र होइन, भावनात्मक कुरा पनि हो । लिंग प्रवेश नभै यौन उत्तेजक रूपमा यौनाङ्गमा औंलाको भरपुर प्रयोग गरेर यौन क्रियाकलापमा संलग्न भएको कुरालाई के भन्ने ?
जैविक रूपमा यौन सम्पर्कको अनुभवहीनता नै कौमार्य भङ्ग नहुनु अर्थात् कुमार वा कुमारी हुनु हो । धेरैजसो स्थितीमा कौमार्य भङ्ग हुने कुरा किशोरी वा युवतीको वा भनौं महिलाको सन्दर्भमा गरिन्छ । त्यसैले होला, कुनै विवाहित दुलहीको कौमार्य परीक्षण गर्ने अनेक उपाय गरिएको भेटिए पनि विशेष गरेर महिलाको योनिच्छद दुरुस्त छ कि छैन भन्ने कुरामा भर परेको देखिन्छ ।
माथि भनिएजस्तै सबैभन्दा केन्द्रमा रहेको परीक्षण केटीमा योनिच्छद छ कि छैन लाई नै मानिन्छ । योनि महिलाको नली आकारको प्रजनन अंग हो र बाहिरवाट देखिने प्वाललाई योनिद्वार भनिन्छ । यही योनिद्वारको ठीक भित्रपट्टि गुजमुज्ज परेको पातलो छालाको पत्र वा झिल्ली हुन्छ जसलाई योनिच्छद भनिन्छ । पहिले–पहिलेको जमानामा योनिमा भएको योनिच्छद यौनसम्पर्क गर्दा च्यातिएर रगत आउनुलाई नै केटीको कौमार्य भंग भए– नभएको आधार बनाइन्थ्यो । यसको प्रमाणका लागि विवाहको पहिलो रात सेतो तन्नामा सुत्नुपर्ने चलन चलाइएको थियो ताकि रगतको दाग स्पष्ट देखियोस् ।
यद्यपि यो आधारलाई वैज्ञानिक मान्न सकिँदैन । कुनै–कुनै केटीको योनिच्छद जन्मजात नै नहुन सक्छ वा यसको राम्रोसँग विकास नै नभएको हुनसक्छ भने यौनसम्पर्कबाहेकका अन्य क्रियाकलापले पनि यसलाई पहिले नै च्यातिदिएको हुन सक्छ । महिलाहरूमा योनिच्छद च्यातिने जस्ता शारीरिक प्रमाण भएको भनिएको स्थितिमा त अहिले आएर पक्का शारीरिक सम्बन्ध राखे–नराखेको भन्न सकिने स्थिति छैन ।
कतिपय सम्प्रदायमा यौनसम्पर्क राखिए पनि परम्परागत रूपमै कौमार्य नवीकरण गर्ने प्रचलन भएको कुरा सुन्न पाइन्छ, तर अहिले कुरा फरक भएका छन् । जो कोही एकपटक यौनसम्पर्कको अनुभव लिइसकेपछि पुनः अनुभवहीनताको स्थितिमा पुग्न सक्दैनन् । बिर्सनुले पनि त्यो स्थितिमा पुगिँदैन । त्यसैले सैद्धान्तिक रूपमा कौमार्यतालाई फर्काउन सकिँदैन, तर अहिले च्यातिसकिएको भए पनि योनिच्छदलाई शल्यक्रिया गरेर फुनर्निर्माण गरिएको पनि पाइन्छ, जसले योनिच्छदलाई कुमारित्वको आधार मान्ने कुरालाई थप जटिल र अमान्य बनाइदिएको छ ।
विचार गर्नुपर्ने कुरा के भने घर परिवार, छर–छिमेक अनि समाजले यस्ता सम्भावित सम्बन्धलाई जहिले पनि नियालिरहेको हुन्छ । आफ्नो कसैसँगको सामिप्यता कसै न कसैले देखेको हुन्छ र यस्ता कुरा सार्वजनिक हुन सक्छन् । कसैले भयादोहन गर्न खोज्यो भने स्थिति कस्तो हुन्छ भनेर पनि विचार गर्नुपर्छ । त्यसैले शारीरिक पक्षमा मात्र ध्यान दिनु बुद्धिमानी हुँदैन
अनौठो ठाउँ, जहाँ छोरी जन्मिसकेपछि आफै छोरा बन्दछन्
June 22, 2020 mithokhabar
नेपालमै यस्तो गाउँ जहाँ केटा नपाए पछि, युवतीहरु बुढीकन्या बस्न बाध्य
June 27, 2021 mithokhabar